Git Sangit News » रुसले बनाएको कोरोना खोप नेपालमा आउने मिति तोकियो !
काठमाडौं । रुसले कोरोना भा’इरसको भ्या’क्सिन विकास गरी अक्टोबर महिनामा सर्वसाधारणमा प्रयोगमा ल्याउने जनाइसकेको छ । उसले विभिन्न देशहरुमा भ्या’क्सिनको माग भइसकेको जनाएको छ । अमेरिकाले र युरोपमा पनि भ्या’क्सिनको विकास हुँदैछ । स’म्भ’वत सन् २०२१ को शुरुमा भ्या’क्सिन विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
चीनले सैनिक र स्वा’स्थ्यक’र्मी’मा कोरोना भ्या’क्सिनको प्रयोग शुरु गरिसकेको छ ।सँसारका शक्तिशाली र धनी देशहरुले कोरोना भाइरसको भ्या’क्सिन विकास गरी प्रयोगको समेत तयारी गरेका छन् । तर, आर्थिक रुपमा विप\_न्न देशहरुले भ्या’क्सिन कहिले प्रयोग गर्न पाउलान् ? यो ग’म्भीर प्रश्न बनेको छ ।
नेपालमा भ्या’क्सिन कहिले आइपुग्ला ? यसलाई केलाउँदा भ्या’क्सिन कति प्रकारका उत्पादन हुन्छन ? कुन कुन देशले उत्पादन गर्छन् ? कति मात्रामा उत्पादन गर्छन् ? मुल्य कति पर्छ ? माग र आपू’र्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ ? उत्पादन गरिएका भ्या’क्सिनको प्रभावकारिता, सुरक्षा र विश्वसनीयता के हुन्छ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबैमा पहुँ\_च पुर्याउने कस्तो भुमिका खेल्छ ? भन्ने यथा’र्थलाई के’ला’उनुपर्ने हुन्छधनी देशहरु अहिले नै भ्या’क्सिन प्रयोग गरेर ढु’क्कसाथ आर्थिक तथा सामाजिक गतिवि\_धिमा स’क्रिय हुने तयारीमा पुगिसकेका छन् । कोरोना भा’इरसले सम’स्यामा पारेको नेपाल जस्तो देशहरुमा यस्तो तयारी देखिदैन । यसले कम्तिमा एक वर्ष आर्थिक गतिविधिमै सम’स्या पारिरहने ख’तरा बढेको छ । खोप आउन २०२१ सम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कतिपयले रुसको कोरोना खोपलाइ विश्वास गर्न सकिँदैन भन्दा , रुसि राष्ट्रपतिले दिए यस्तो कडा जवाफ –बीबीसी।
रुसले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणविरूद्ध बनाएको खोपको सुरक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चि’न्ताहरू व्यक्त भइरहेका बेला उसले त्यस्ता चिन्ताहरूलाई “बिल्कुलै आ’धारहीन” भनेको छ। रुसले मङ्गलवार देशको नियामक निकायले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणविरू’द्ध रुसमै विकसित एउटा खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको बताएको थियो।
उक्त खोप दुई महिनाभन्दा कम समय मात्रै मानिसहरूमा परीक्षण गरिएको थियो । तर विज्ञहरूले रुसले यति चाँडै खोप बनाएकोप्रति सन्देह व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तो स’न्देह व्यक्त गर्ने देशहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र अमेरिका सबैले यो खोपलाई लिएर स’तर्क रहन भनेका छन् । त्यसपश्चात् बुधवार रुसका स्वास्थ्य मन्त्री मिखाइल मुराश्कोले रुसी समाचार एजेन्सी इन्टरफ्याक्ससँग भने, “यस्तो देखिदैछ कि हाम्रा विदेशी मित्रहरूलाई रुसी औषधि प्रतिस्पर्धामा अगाडि जाने कुराको फाइदाबारे जानकारी भयो र उनीहरू यस्तो कुरा गरिरहेका छन् जुन बिल्कुलै आधारहीन छ।”
प्रकाशित मिति २९ श्रावण २०७७, बिहीबार १०:२४